Huru Dhata - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Anodada kuve Leadinfo akasimbiswa vadyidzani!
Dzvanya apa kuti uwane 10% Discount pane Leadinfo Kunyorera!
Webhu uye Nhare Yekushandisa Kunze
Big Data Analytics uye Data Sayenzi
Artificial Intelligence uye Mashini Kudzidza
AR uye VR Mhinduro
WOONA ZVESE ZVAKAITWA
Seizvo zita rinoratidzira, Big Data inoreva kune hombe ruzivo rwakaunganidzwa kwenguva yakati kwechimwe chinangwa. Mumwe wemienzaniso yakajairika ingave ruzivo rwevashandisi. Kuenderera mberi kusarura kunoenderana nehuwandu hwevashandisi vazhinji kwenguva yakati rebei kunogona kunzi Big Data. Iine huwandu hwe data rakapihwa kune yepasirese webhu zuva nezuva, izvo zvingangonzwisisike izvo zvinogona kuunganidzwa kubva kuiri ruzivo hazvigoneke.
Yechokwadi nguva inobatsira kumabhizinesi
Nekushanduka kweinternet uye akasiyana-siyana matsva-zera matekinoroji, hombe data uye iko kushanda kuri kupupurira kuwedzera kudiwa. Mabhizinesi anopfuura-nguva anounganidza seti yeruzivo, iyo painenge yaongororwa inogona kuratidza zvakatarwa nezve maitiro evatengi uye kuwirirana kwayo. Analytics inoita kuti zvikwanise kuchengeta iyi seti yeruzivo uye kuigadzirisa kuti iwedzere kuongorora kudzama kwebhizinesi. Izvo zvinobatsira zvakare kuongorora mamiriro azvino ebhizinesi uye kufungidzira fungidziro zvichibva paseti yekutarisa.
Iko kusimba kwedata hombe hakurarame muhuwandu hwemashoko akaunganidzwa pamanyuko, asi nemabatiro anoita mabhizimusi ruzivo urwu mukuongorora maitiro azvino nekushandisa ramangwana. Sekureva kwaGartner, anopfuura 75% emakambani ari kuronga kuisa mari mune izvi. Nekudaro, zano harisi rekungoongorora maitiro asi zvakare kuiongorora nekukurumidza kuchengetedza kugona. Iine huwandu hwakawanda hwetekinoroji yepamusoro-simba inowanikwa, hunyanzvi huri mukuburitswa kweruzivo rwaunoda. Dichiwedzera pamusoro pekukanganisa kweruzivo rwakachengetwa, zvakanakira zvinogona kugadzirwawo.
We at NewGenApps
Kugadzirisa kudiwa kuri kuwedzera kwe Big Data analytics iwo mabhizinesi anokwanisa kuwedzera mukuita kwavo kwemazuva ese, timu yedu pa NewGenApps zvinoita kuti tigare tiri nhanho kumberi nguva dzose nekubatanidza hunyanzvi hwemumba tichabatana nevatungamiriri vetekinoroji vanosanganisira Microsoft neGoogle. Zvishoma zvezviitiko zvedu zviri kuitika zvinoisa kusimbisa pa: Kuzvidzidzira-kudzidza kutumira nzira ichibatanidza machine learning uye makuru data matekinoroji
Yakarongedzwa kugona kuronga kwekufungidzira modhi Kugadzira masisitimu ehunyanzvi akasimba zvakakwana kubata makuru uye akasiyana marudzi e data seti
Pane iyo Tech Stack: Hadoop, Spark, Tafura, Microsoft Simba BI, QlikView
Our purojekiti Muchidimbu
Isu tinovaka nekukudziridza yekushanda, kurarama uye kutaurirana. Isu tinotora mapurojekiti nechinangwa chekutsvaga smart, mitsva mhinduro kumatambudziko, makuru uye madiki.
Enda kune mobile version
Wona AMP vhezheni